အပင်ကျန်းမာရေး - SPS-EP
သီးနှံပိုးမွှားရောဂါပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မရှိသေးသည့် ဖျက်ပိုးများ ဝင်ရောက်မလာစေရန် ဥပဒေအရ ကာကွယ်တားဆီးသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ အပင်ပိုးမွှားကာကွယ်သည့် ဥပဒေကို ၁၉၉၃ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၆) ရက်နေ့တွင်ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာန်ိုင်ငံ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင်.ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနနှင်. တရုတ်ပြည်သူ.သမ္မတနိုင်ငံ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကြီးကြပ်ရေး၊ စစ်ဆေးရေးနှင်.ပိုးမွှားကင်းစင်မှူ. အာဏာပိုင်အဖွဲ.တို.အကြား မြန်မာနိုင်ငံမှဆန်ကိုတရုတ်ပြည်သူ.သမ္မတနိုင်ငံသို.တင်ပို.ရန်စစ်ဆေးခြင်းနှင်.ပိုးမွှားကင်းစင်ရေးသဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားပါသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကြီးကြပ်ရေး၊ စစ်ဆေးရေးနှင့်ဖျက်ပိုးကင်းစင်ရေးအုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှဆန်ကိုတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့တင်ပို့ရန်အပင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် သဘောတူစာချုပ်
Rice exported to China According to AQSIQ protocol
2015 6750 MT(s)
2016 71775 MT(s)
2017 28810 MT(s)
2018 1650 MT(s)
As of (31.5.2019) 6257 MT(s)
Total 115242 MT(s)